Ogwe ọkọlọtọ ọkọlọtọ, Obere ọkọlọtọ, ọkọlọtọ osimiri - Wisezone
Ogo ọla edo, obere oge ụzọ, ọnụ ahịa ezi uche dị na ya
Sistemụ mkpanaka 4in1 nke ọ bụla na-abịa na mkpanaka ọnụ na-agbanwe agbanwe na ogwe aka. Ntụgharị na-agbanwe agbanwe bụ maka ọkọlọtọ nku, ọkọlọtọ anya mmiri na ọkọlọtọ shark na-ekerịta otu ogwe osisi zuru oke Ogwe ogwe aka bụ maka ọkọlọtọ akụkụ anọ, nke na-eketa otu ogwe ala ma e wezụga mkpanaka ọnụ Ya mere, otu ụdị osisi mana dabara maka ọdịdị kachasị ewu ewu. Ọ dịghị mkpa ka ị nweta ngwaahịa maka ụdị ọkọlọtọ ọkọlọtọ ọ bụla, pụtara ịchekwa ego gị na ohere ngwaahịa, ogwe osisi anyị bụ carbon composite, ha nwere ike inye ọkwa dị elu nke ...
Dị iche na nke anyị kpochapụwo azu paaki SFH, anyị na-akpali ọkọlọtọ ugwu nke Backpack ọkọlọtọ & banye n'ime nke zippered compartment na-ahapụ azụ panel flat Ogwe ọkọlọtọ e mere dị ka a mgbanwe ngwakọta nke ise ọkọlọtọ nhọrọ na otu usoro, Otu azu paaki na otu flagpole nwere ike. uwe 5 na-ewu ewu shapes (nku, anya mmiri na rectangle, arch, paddle) Nnukwu elu dị n'azụ, na-enye gị ohere mado akwụkwọ mmado na ya, ya mere ma ọkọlọtọ na nnukwu akwụkwọ mmado ga-adọrọ mmasị, nyere gị aka inyocha ite ndị ọzọ. ...
Ụdị ọkọlọtọ na omenala maka ọkọlọtọ igwe kwụ otu ebe na-eme ka ndị ọzọ hụ igwe igwe gị nke ukwuu site n'ịkwanye ọkọlọtọ ụtarị na-agbanwe agbanwe na igwe kwụ otu ebe. A naghị eji bracket ọkọlọtọ anyịnya igwe maka ọkọlọtọ nchekwa igwe, kamakwa maka mgbasa ozi ngosi anya mmiri ma ọ bụ ọkọlọtọ nku nke na-enye gị ohere ịmepụta na ibipụta ozi maka nkwalite. Ọkọlọtọ ọkọlọtọ mgbasa ozi igwe kwụ otu ebe dị mfe ịwụnye ma wepu ya na igwe kwụ otu ebe na-enweghị ngwaọrụ ọ bụla Ihe nkwado ọkọlọtọ igwe kwụ otu ebe bụ nke aluminom kpuchie ntụ ntụ, ...
Oghere ọkọlọtọ Pin point gụnyere okporo osisi carbon composite, Y shape metal connector na oxford na-ebu akpa. Ogwe ihe mejupụtara carbon na-agbanwe ma sie ike karị iji mee ka ọdịdị ahụ kwụsie ike na ọ dịghị mfe ịgbaji. Enwere ike itinye njikọ njikọ Y na ntọala ọ bụla nke anyị. Ọkọlọtọ akara ga-atụgharị na-ebu spigot wee mepụta nlele 360° na ikuku. Akpa akpa Oxford siri ike yana adaba maka mmemme dị iche iche. Ọkọlọtọ Pin Point nwere nnukwu ebe eserese maka otu akụkụ ma ọ bụ akụkụ abụọ. ...
Akwụkwọ Banner imewe A/B/C, otu ihe owuwu mana ogologo osisi dị iche iche. Akụrụngwa ahụ nwere ogwe osisi abụọ na otu Y shape metal bracket Design D bụ ọkọlọtọ 3D wee nabata usoro nchekwa nche anwụ nke na-eme ka ọ dị mfe ịtọlite ​​​​ma ọ bụ ịkwasa ọkọlọtọ akwụkwọ nwere ike ịtụgharị na ikuku, nke na-adọta uche ma gosipụta ozi gị. ndị na-agafe agafe. A na-eme mkpanaka ọkọlọtọ site na ihe mejupụtara carbon nke nwere ike ikwe gị nkwa ogologo oge na-eji oge ọbụlagodi ọnọdụ ikuku Kere D, rite uru na f ...
Enwere ike iji arch Rainbow n'otu n'otu, na-arụ ọrụ dị ka onyinyo maka nkwalite ụgbọ ala ma ọ bụ ọnụ ụzọ nnabata maka ụlọ ahịa Ọ bụrụ na ị na-eji ihe omume abụọ eme ihe na-agafe ọnụ, ọkpụkpụ egwurugwu nwere ike ịrụ ọrụ dị ka ụlọikwuu na ihe omume dị n'èzí, ma ọ bụ mepụta mpaghara mkparịta ụka azụmahịa. na ihe ngosi ahia ahia. Enwere ike itinye ọkọlọtọ ndị ọzọ na ntọala igwe nke Rainbow arch, mee ka ọnụ ụzọ ámá gị mara mma ma gosipụta ozi mgbasa ozi karịa site n'echiche dị iche iche. Nnukwu ihe ngosi n'otu akụkụ ma ọ bụ akụkụ abụọ. Interchan...
Enwere ike itinye ọkọlọtọ iko mmiri ara n'elu dị larịị dị ka iko/tile/metal. Ụdị 3 dị iche iche (nku / anya mmiri / akụkụ anọ) dị. Ọ dị mma maka ịzụ ahịa, ụlọ nri, mmemme na ndị ọzọ! Ma ọ bụ akụkụ-mgbanwe, ị nwere ike inwe akụkụ ziri ezi nke ịchọrọ. Uru (1) nke WZRODS bidoro n'ụwa niile (2) Nrụgharị ntugharị na-eme ka ogwe osisi nwere ntụgharị ogo ogo 360. (3) Ụdị 2 n'ime usoro mkpanaka 1 na-echekwa ọnụ ahịa gị na ohere gị. (4) Angle na-agbanwe agbanwe ma na-atụgharị nke ọma na ifufe (5) Ọkọlọtọ chọrọ ...
Oghere dị n'ahịrị a na-emegharị emegharị, nke a na-akpọ rectangle gbapụta ọkọlọtọ ọkọlọtọ zuru oke maka n'ọhịa ma pụọ. Enwere ike ibugharị, dị ọkụ ma na-agbanwe agbanwe, Bọdụ Ubi anyị na-enye ohere ịtọlite ​​​​enweghị mbọ. Nhazi ya nwere ike imebi na-eme ka ngwaahịa a bụrụ nnukwu nhọrọ maka mgbasa ozi ụlọ ọrụ gị na-esote, na-egosi onye nkwado na asọmpi ma ọ bụ na-anọchite anya otu gị. Ọ na-adị mfe si n'ọkwa ya apịaji pụta wee gbadata bụ ihe dị ka sekọnd. Uru (1) Enwere ike ịgbagọ ọkọlọtọ n'ime ihe na-erughị ọkara ya...
Weihai Wisezone bụ ụlọ ọrụ mbụ na China nke na-eji ihe mejupụtara carbon eme mkpanaka ọkọlọtọ kemgbe 2005.
Kemgbe March nke afọ 2020, COVID-19 gbasapụrụ ngwa ngwa na Europe na America, ebe ndị ahịa anyị nọ na-emetụtakarị na ọbụna ka akpọchie ya.
Lelee ihe ọzọ >>
Ụlọ nkwakọba ihe nke mba ofesi
Mkpokọta nkwakọba ihe nke mba ofesi